Nuur Axmed oo u dhashay Afgaanistaan waxa uu Baaskiil ku tagay Makkah si uu xajiyo! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Nuur Axmed oo u dhashay Afgaanistaan waxa uu Baaskiil ku tagay Makkah...
Nuur Axmed oo u dhashay Afgaanistaan waxa uu Baaskiil ku tagay Makkah si uu xajiyo!
Nuur Axmed oo u dhashay Waddanka Afghanistan kana mid ah xujeyda Sanadka 1443 Hijriya ayaa baaskiil ku tagay Magaalada Makkah si uu isugu diyaariyo gudaha acmaasha Xajka Alle sida ay sheegtay Wasaaradda Xajka ee Boqortooyada Sacuudiga.
Mar uu la hadlay Warbaahinta ayuu sheegay in uu baaskiil ku tagayo Magaalooyinka Barakeysan, waxa uu diiday in Dowladdiisa ay ka bixiso lacagta laga rabo xaajiga si uu uga mid noqdo Martida Alle.
“Waxa aan doonayaa in aan baaskiilkayga ku safro kuna guto waajibaadka iga saaran Xajka Alle oo ah tiir kamid ah tiirarka Islaamka” ayuu yiri Nuur Axmed oo ka hadlay safarkiisa Baaskiilka ee uu ku tagay Magaalada Makkah.
Nuur waxa uu kamid noqonayaa halka milyan ee qof ee sanadkaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u ogolaato in ay gutaan waajibaadka Xajka kaddib labo sano oo xayiraad ka dhalatay Covid-19 saarneed ajaanibta.
Waxa uu dhiiragelin ka helay qaar kamid ah Dadkii uu la kulmay, qaarkood ayaa ka codsaday in uu usoo duceeyo maalmaha uu gudanayo acmaasha Xajka iyo inta uu ku sugan yahay dhulka Barakeysan sida uu hadalka ud higay Nuur Axmed.
“Noo soo cudeey” & ereyo kale ayay Dadka la kulmay Nuur ka codsanayeen maadaama baaskiilkiisa uu ku dhexmarayo Magaalooyinka Barakeysan halkii uu raaci lahaa Basaska iyo Gaadiidka kale ee loo diyaariyay Xujeyda ama qaarkood ay lugeynayaan.
Previous articleShiinaha oo Ruushka & Ukraine ugu baaqay in ay dib u billaabaan wadahadalka nabadda lagu raadinayo.